विराज भट्टसँग मेरो सम्बन्ध ब्ल्याकमेलिङका लागि होइन, अनन्तकालसम्म जीवनयापनका लागि हो । हाल ट्राभल हाउस, १२६ ब्रोडवे, लण्डन, डब्लू १३ ओएसवाइमा व्यवसाय गरी बस्ने वर्ष ४६ का विराज १९९७ मा अध्ययनका लागि बेलायत जानुभएको हो । उहाँसँग ७ जुन २०१५ मा पहिलोपटक भेट भएदेखि हाम्रो सम्बन्ध नियमित थियो । उहाँले श्रीमती त्यागेर छुट्टै बसेको अवस्थामा विभिन्न आश्वासन दिई सँगै बस्ने बाचास्वरुप हाम्रो सम्बन्ध जोडिएको हो… विस्तृत समाचार
म शुरुदेखि नै जनआस्थाको नियमित पाठक हुँ, मेरो संकलनमा विभिन्न कारणले बाहेक बढीमा चार थान कमी छ । पत्रिका बढी बिक्री गराउन दरबार र सेनाका (जायज नाजायज) खबरलार्ई उत्तेजित तरिका र नौलो शीर्षक दिएर छापिने गरेको सबैजसोको इतिहास छ । अब दरबार छैन, सेनाबाट पनि मसला नआउने हैन तर बेलाबखत बिना अर्थका झुत्रे खबरलार्ई प्राथमिकता दिन खोजेको देखँे । एक हप्तामा निस्कने पत्रिका पनि पढ्नै… विस्तृत समाचार
सुनकाण्डको कुरा गर्नेबित्तिकै धेरैले भन्ने गरेका छन्, ‘खोई त त्यत्रो सुन ल्याउँदा रकम ट्रान्सफर गर्ने बैंकको नाम खुलेको छैन ? कसले, कसरी रकम पठाउँथ्यो त्यो पनि थाहा छैन । तर, खास कुरा के हो भने कल डिटेल हेरेर त्यसबेला गोरेसँग प्रहरीका क–कसको सम्पर्क भएको थियो त्यता मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएको थियो । फेरि गृह मन्त्रालयबाट गठित टोलीको काम भनेको सनम शाक्य हत्यासम्बन्धी छानबिन गर्ने हो… विस्तृत समाचार
प्रकृतिको आफ्नै गति छ । कोही मानिसको आग्रह–पूर्वाग्रहले चल्ने, नचल्ने होइन । सूर्य उदाउने–अस्ताउने समय मान्छेको बुताले परिवर्तन गर्न नसक्ने भएझैं हावा लाग्ने, पानी पर्ने कुरा पनि हाम्रो चाहनाले हुँदैन । तैपनि कतिपय मानिस अन्धविश्वासकै पछि लागिरहेका छन् । बर्सेनि वर्षा भएजस्तै खडेरी पनि लाग्छ नै ! खडेरीका बेला पानी पार्ने नाममा पूजा गर्ने चलन कायमै छ ठाउँठाउँमा । नवलपुरको गैंडाकोट–८ मा गत शनिबार केही… विस्तृत समाचार
२०४० सालमा अंशबण्डा भई भान्सा अलग भए तापनि छोरा–बुहारीले आफ्नो आम्दानीबाट परिवार धान्न नसक्ने अवस्था पर्दा घरवार चलाएँ । परिवार संख्या बढ्दै गयो । हामीलाई हेर्नेभन्दा पैसा उठाउने काम बेसी हुन थाल्यो । तैपनि छोरा, बुहारी, नाति, नातिनीको संस्कार, खर्च (पढाइ, स्वास्थ्य, घर) सबै गरी नै राख्यौं । हामीलाई पैसा मात्र उठाउने (एटिएम मेसिन) बनाउने तर अभिभावकप्रतिको कर्तव्य ननिभाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । चार छोराबुहारी… विस्तृत समाचार
सेनामा केही अफिसर यस्ता छन्, जसले सबैभन्दा बढी सुविधा, सहुलियत, भ्रमण र तालिमको अवसर लिएका छन् । नेपालमा हुँदा पनि सधैं आकर्षक पोस्टिङ मिलाएर बस्थे । यस्ता अफिसरको सूचीमा महासेनानी अनुपजंग थापा सबैभन्दा माथि पर्छन् । मेजर हुँदै भावी चिफको पगरी गुथाइएका उनी नक्सालनिवासी अवकाशप्राप्त पाइलट जर्नेल तेजेन्द्र थापाका छोरा हुन् । बेलायतमा अफिसर तालिम लिएका उनको व्यक्तिगत किताब हेर्ने हो भने युके, युएसए, स्विट्जरल्याण्ड,… विस्तृत समाचार
वीरगतिप्राप्त सैनिकका परिवार तथा एकल महिला मिलेर २०७४ साल मंसिरमा समूह दर्ता भएको हो । समूहले कुनै आपतकालीन अवस्था पर्दा वा मरिमराउ हुँदा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरी ४० हजारसम्म किरिया खर्च सहयोग गर्दै आएको छ । बाबु र आमाको पनि देहावसान भएका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने वातावरणसमेत मिलाउने गरेको छ । आफ्नै कार्यालय भवन नभएका कारण झोलामा कागजपत्र बोकेर खुला मैदानतिर बैठक बस्ने बाध्यता छ… विस्तृत समाचार
​सिध्याउलान् है यता छिरेर सरकार !
अर्थ मन्त्रालय तथा डेिनस दूतावासका बीच मूल सम्झौता भई डिएफआइडी र स्विस दूतावासकोसमेत आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वयनमा रहेको गभर्नेन्स फेसिलिटीले (जी एफ) निरन्तर नेपाल सरकारलाई चुनौती दिँदै नाजायज काम गरिरहेको आरोप छ । उक्त कार्यक्रमकी प्रमुख क्यारोलिन भेन्डराबिले, उपमुख शालिनी त्रिपाठी तथा जोन टनेलाको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा विवादित व्यक्ति तथा संस्थालाई परियोजनाका नाममा ठुल्ठूला रकम बाँड्ने काम भइरहेको भनिन्छ । दीपेन्द्र झाको तराई मानवअधिकार एलायन्स नामक संस्थालाई… विस्तृत समाचार
​कस्ता कस्तालाई पाखा लगाएर...
सेनाबाट विभिन्न युन मिसनमा भाग लिने पर्यवेक्षक र स्टाफ अफिसर जम्मा २७ जनाको नाम निकालिएको छ । सहायक रथीको प्रमोसनमा दुईपटकसम्म पछाडि पारिएका प्रचण्डका प्रधानसेनापति कुलबहादुर खड्काको साढुभाइ महासेनानी सुरेश बानियाँ युनिफिल लेबनानमा एक वर्षका लागि स्टाफ अफिसर छनोट भएका छन् । लामो समय सैनिक सचिव रहेर धेरै आर्थिक उन्नति गर्न सफल सहायक रथी खड्क मल्ल भने घर जानुअघि मालदार अड्डा खाद्य परिवहन निर्देशनालयमा सरुवा… विस्तृत समाचार
​गोप्य भेटको के हो गुह्य ?
हेलिकोप्टर र मिडिया व्यवसायी क्याप्टेन रामेश्वर थापाले सरकार बन्नु केही दिनअघि ओली र प्रचण्डबीच बढेको तिक्ततालाई मत्थर पार्ने प्रयत्न गरेका छन् । एकीकरण हुने क्रममा संख्याको विवाद आउन थालेपछि प्रचण्डले अघिल्लो साता थापालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाइदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो । सोही बमोजिम भारत जानुअघि उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सो खबर सबिस्तार सुनाएका थिए । थापाको बालुवाटार छिर्ने क्रमसमेत पछिल्लो समय बाक्लिएको सुरक्षाकर्मी बताउँछन् ।… विस्तृत समाचार